Smart akatungamirira ratidza
LEDbow Solar isina waya yemagetsi traffic traffic
A1: Isu tiri mugadziri uye fekitori yedu iri muFoshan, Guangdong Province, isu zvakare tine yedu R&D timu. Kugamuchirwa kutishanyira!
Q2. Ndingawanewo muenzaniso weodha ye Solar wireless mobile traffic lights?
A: Ehe, tinogamuchira odha yemuenzaniso kuyedza uye kutarisa mhando. Yakasanganiswa samples inogamuchirwa.
Q3: Unokwanisa here kupa akagadziridzwa dhizaini masevhisi zvinoenderana nepfungwa kana kudhirowa?
A2: Ehe, isu tiri mugadziri anochinjika, uye zvakare maererano nemaitiro echigadzirwa chedu tinogona kupa zvigadzirwa zvakagadziridzwa, iwe unongoda kupa zvaunoda kana kudhirowa kwakadzama kwatinogona kukuitira.
Q4. Nzira yekuenderera mberi neodha ye Solar wireless mobile traffic lights?
A: Chekutanga tizivise zvaunoda kana kushandisa.
Chechipiri, Isu tinodzokorora zvinoenderana nezvaunoda kana mazano edu.
Chechitatu mutengi anosimbisa masampuli uye anoisa dhipoziti yeodha yepamutemo.
Chechina Tinoronga kugadzirwa.
Q5: Iwe unopa vimbiso yezvigadzirwa?
Q6: Nzira yekugadzirisa sei matambudziko ehutano mushure mekutengesa?
A: Ndokumbira upe ruzivo rwedambudziko. Isu tichaita mhinduro inogutsa kwauri mukati maawa makumi maviri nemana mushure mekunge tasimbisa matambudziko.
LEDbow VMS traffic kutungamira kuratidza
LEDbow Traffic chiratidzo chekubatanidza kuratidza
LEDbow lane mubhadharo kuratidza
LEDbow IOT traffic chiratidzo controller
Kero RM. 707, Building #3, Tian an Center, No.31 Jihuadong Road, Guicheng, Nanhai District, Foshan City,Guangdong Province,China
Zvekubvunza nezve zvigadzirwa zvedu kana pricelist, ndapota siyai kwatiri uye isu tichabatana mumaawa makumi maviri nemana.
Smart danda | Smart LED kuratidza | Smart LED poster inoratidza Taxitop LED kuratidza ©Copyright ©2021 Kodzero dzese dzakachengetwa.